Spotify ine mutengi nyowani weLinux sechipo chekutanga cheKisimusi | Linux Vakapindwa muropa
MuLinux takave nerombo rakaipa ne Spotify kuona sezvazvakaitika nemamwe mapurojekiti mazhinji anotarisisa kwavo kuvandudza vatengi vavo veWindows, Android, iOS uye kukanganwa mamwe mapuratifomu ane vashoma vashandisi. Zvakanaka, ndosaka isu taona imwe yechinyakare interface yeapp iyo inosanganisira iyo Spotify mutengi weLinux desktop ine budiriro iyo yakasiyawo chinhu chinodiwa maererano nekushanda. Zvakanaka, izvi zvapera kana zvirinani kuti zvive nani ...
Iye zvino kubva kuSweden ivo vanotipa isu yekutanga yeKisimusi chipo nemutengi ari nani kubva Spotify yeLinux kuti isu tatova neinowanikwa kune vese vanoda mimhanzi uye chikuva ichi kubva kwatinogona kuwana zvemukati zvese mahara (zvichikanganisa kushambadza) uye zvakare neprimiyamu maakaundi pasina aya ma ads anombogumbura. Uye mukutsinhana nema euro mashoma isu tinogona kuve nemimhanzi yese yatinofungidzira kubva kune vanozivikanwa uye kwete-vanozivikanwa-maartist.
Nyowani app inoshanda zvakakwana uye chimiro chayo chave chazvino, chave chayedzwa paLinux Mint, Ubuntu, Solus, openSUSE, Manjaro, uye Debian. Isuwo tinayo mumudziyo wepasirese unogona kushanda mune chero kupi kugoverwa, pachinzvimbo chekuparadzirwa mumhando dzakasiyana dzemapakeji sezvazviri nezvimwe zvinoshandiswa. Izvo zvakare zvinoderedza basa revagadziri vanongofanira chete kuchengetedza imwe mhando yepakeji uye kwete akati wandei avo.
Vagadziri vacho pachavo vakashuma kuti kuva ne pakarepo Iye zvino vese vashandisi vanogona kunakidzwa neSpotify kubva kuLinux ecosystem uye vane yazvino vhezheni yeiyi inotungamira app zvisinei nemhando yekugovera yatinayo. Neiyi app nyowani, mhando yeruzha yakanaka kwazvo, iyo interface yakanaka kwazvo, uye ine zvese maficha anopiwa mune hombe vhezheni yeSpotify, senge runyorwa, mavhidhiyo, podcast, zviitiko zveshamwari, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Spotify ine mutengi nyowani weLinux sechipo chekutanga cheKisimusi